Gabadh yar oo Habeenkii Qolkeeda keligeed Quraan ku Aqrisan jirtey iyo Mucjisada lagu arkey markii ay Geeriyootay | Salaan Media
Gabadh yar oo Habeenkii Qolkeeda keligeed Quraan ku Aqrisan jirtey iyo Mucjisada lagu arkey markii ay Geeriyootay
January 15, 2019 | Published by: cabdikhaaliq diiriye
Qiso cibiro iyo wax-ku-qaadasho mudan oo ka dhacday dal carbeed oo aan magaciisa la xusin ayaa Waxaa jirtay gabar da’ yar oo barata takhasus diini ah. gabadhan yar oo aad u cod macaanayd marka ay qolkeeda gaarka ah tagto, ka hor inta aanay seexan waxa ay akhrisan jirtay Qur’aanka Kariimka ah oo ay aad u taqaannay.
Inanta yar hooyadeed ayaa habeen kasta si dhuumasho ah ku dhegaysan jirtay gabadheedan sida aadka u fiican ee ay Qur’aanka Kariimka ah u akhrido. Muddo kadib ayaa ay gabadhii yareyd bukootay ama xanuunsatay dabeedna dhowr maalmood oo ay cusbitaalka ku sakaraad ahayd ayaa tii Allaah ay u timi oo waa ay dhimatay. Markii digtoorkii gacanta ku hayay xaaladda gabadha yar uu qoyskii u sheegay geerideeda aad ayey uga naxeen, sida caadiga ahna waxa ugu naxdin badnayd gabadha yar hooyadeed.
Maalintii u horraysay tacsida gaabdhii yareyd oo ahayd maalin dhererkeedu uu hooyadeed ula dhigmo sannad murugo ah ayaa markii ay dhamaatay, dadkii tacsida yimidna ay kala tageen, hooyadii oo qalbiga ka ilmaynaysa ayaa u luudday qolkii ay deggenayd gabadheedii.
Markii ay islaantii ay ku soo dhowaatay Albaabkii qolka ayaa waxa ay maqashay cod u eg oohin, qolkan cidlada ah oohinta ka baxaysaa waxa ay ahayd cod hoose oo aad mooddo dad badan oo hoos u reemaya. Hooyadii waa ay argagaxday waxaana ay ka baqatay in ay gasho qolkan cidlada ay ku hubto ee haddana ay oohintu ka baxayso, dib ayaanay isaga noqotay.
Hooyadii oo aad u yaaban ayaa waaberigii dadkii guriga joogay uga warrantay mucjisadii ay xalay aragtay, laakiin markii la soo eegay qolkii waxba lagama helin, dadka qaarna waxa uun ay u arkeen hooyo murugadii dhimashada inanteeda la xanuunsanaysa. Isla maalintii labaad ayaa ay hooyadii saacaddii oo kale maqashay oohintii ka baxaysay qolka ay deggenayd gabadhii dhimatay, markan waxa ay go’aansatay in ay u tagto nin sheekh ah, balse si ay arrintan talo uga weydiiso. Sheekhan oo aad ugu wanaagsanaa cilmiga diinta Islaamka, markii ay islaantii hooyada aheyd ay uga warantay wixii ay aragtay labada habeen ee isku xiga, isku waqtiga keliya, ayuu Sheekhii aad ula yaabay arrintii, waxa aanu ka dalbaday, “Waxa aan rabaa in aan kuu raaco guriga, saacadda ku beegan waqtigii aad codkan maqashayna aynu tagno qolka. Markaas ayaanay dhacday arrin mucjiso noqotay oo dadkii ka wada ilmaysiisay.
Makii uu Sheekhii galay qolkii ayuu maqlay codkii oohinta ahaa ee ay islaantu maqli jirtay. Isaga oo oohin hadalkiisu la googo’ayo ayaanu yiri, “Allaahu Akbar, Waxa aan filayaa in waxa aan maqlayaa ay tahay oohintii Malaa’igta. Diinteenna Islaamku sida ay inoo sheegtay, marka meel khayr ka socdo Malaa’igta ayaa timaadda si ay uga qayb gasho” kadib waxa uu qoyskii waydiiyay waxa ay gabadha yari qaban jirtay marka ay qolkan joogto, waxa aanay u sheegeen in ay habeenkii kalideed iyada oo ah ay aad u akhrisan jirtay Qur’aanka Kariimka ah. Sheekhii ayaa ugu jawaabay, “Waxa aan filayaa in oohinta baxaysaa ay tahay Malaa’igtii habeen kasta dhegaysan jireen Qur’aanka gabadha ay akhriyi jirtay, maantana waa kuwaas u ooyaya codkii iyo khayrkii ay dhegaysan jireen, Allaahu Akbar.. Allaahu Akbar…”
Fadlan walaal Share dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u aqriyaan qisadan.
Xuquuqda qoraalkan waxa iskaleh
ABDULAAHI NUR COLOMBO